Izithombe zezithombe zamamodeli azungeze umhlaba wonke - Amahhala
Amamodeli avela kuwo wonke umhlaba
Isitayela nemfashini ziba zibaluleke nakakhulu emphakathini wethu. Cishe wonke umuntu ubheka ukubukeka okuphelele, ukuphupha komuntu ophelele noma ukusebenza ekwenzeni ngcono indlela yakhe yesitayela.
Amamodeli avela kuwo wonke umhlaba - Amakhasi omfanekiso
Kungakhathaliseki ukukhipha imidwebo noma ama-ejenti wokufanisa - kunamanje izindlela eziningi zokuqala njengesibonelo noma okungenani wenze umzamo wokuqala. Kodwa-ke, kungakhathaliseki ukuthi umuntu owaziwa ngempela njenge-skipper noma i-klum ingangabaza.
Sinikeza wonke umuntu (!) Ithuba lokuzethula ngezithombe zabo siqu
Siyajabula ukufaka izithombe zakho ezithombeni zethu. Ngokucela ngesixhumanisi kuwebhusayithi yakho. Sicela uxhumane nathi.
Yiba ngubaba - ukukhulelwa embonweni womuntu
Inhliziyo yekhasi lekhasi kusukela enhliziyweni